Posted by မြန်မာပြည်ကိုလွမ်းတယ် at 09:02
lotto 649 31 May 2008 at 10:54
Tea 31 May 2008 at 12:07
မမေရေ.. အမှန်တရားက တစ်ချိန်ကျရင်တော့ အနိုင်ရလိမ့်မယ်လို့ ယူဆပါတယ်။
အောင်သာငယ် 31 May 2008 at 13:50
You make me cry. You areahero. I am very proud of you, Li'l Sister.
Nyein Chan Aung 1 June 2008 at 21:32
စကားလုံးတွေ ပျောက်ဆုံးနေတယ်။ ညီမလို သိမ်မွေ့နူးညံ့သူတစ်ယောက်ကတောင် အခုလို အမှန်တွေ ပြောနေပြီဆိုတော့ တကယ့် ဖြစ်ရပ်အမှန်က ဒီထက်အများကြီးပိုဆိုးမှာပါ။ ညီမအတွက် ဂုဏ်ယူတယ်။ အလှူအတန်းတွေအတွက် သာဓုပါ ညီမရယ်။ ကံကံ၏အကျိုးကြောင့် ဒုက္ခသည်တွေ အမြန်ဆုံး ဒုက္ခမှကင်းဝေးကြပါစေ။
ခင်မင်းဇော် 1 June 2008 at 23:04
ပို့စ်တွေ ဖတ်ပြီး ငိုလိုက်ရတာ မေရယ်...
ကံအကျိုးပေးမယ် ဆိုပေမယ့် ခုထိ ဘာလို့ မပေးသေးလဲ မသိပါဘူးကွယ်..
ပြည်သူတွေအတွက် ရေရှည်အလှုလုပ်နိုင်ဖို့ စုစည်းကြရဦးမယ်..
ဖြူ2June 2008 at 15:42
အစ်မအတွက် တစ်ကယ်ဘဲ ဂုဏ်ယူမိပါတယ်။
JulyDream 11 June 2008 at 19:33
ကလေးတွေ အတွက် ကျွန်တော်တို့ တစ်ခုခုတော့ လုပ်ပေးမှ ဖြစ်မှာပါ။ ၁ ယောက်အား နဲ့ မရတာကတော့ သေချာတယ် ဗျာ။